Gbasara Anyị | Shandong Dingtaisheng Machinery Technology Co., Ltd.
DTS dabere na China, onye bu ụzọ ụzọ ya bụ ntọala 2001. DTS bụ otu n'ime ndị na-eweta ngwaahịa na ihe ọ forụ stụ na -emepụta ọgwụ na Asia.
Na 2010, ụlọ ọrụ gbanwere aha ya na DTS. The ụlọ ọrụ na-ekpuchi a ngụkọta nke ebe 1.7 nde square mita na, isi ụlọ ọrụ dị na Zhucheng, Shandong n'ógbè, o nwere 160 ọrụ. DTS bụ ụlọ ọrụ dị elu nke teknụzụ na-ejikọ ọnụ ọkọnọ, ngwaahịa R&D, nhazi usoro, imepụta na n'ichepụta ihe, nyocha ngwaahịa mechara, njem ụgbọ njem yana ọrụ ahịa.
Companylọ ọrụ ahụ nwere CE, EAC, ASME, DOSH, MOM, KEA, SABER, CRN, CSA na asambodo ndị ọkachamara mba ụwa. E rerela ngwaahịa ndị a karịa mba 35 na mpaghara, yana DTS nwere ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ire ahịa na Indonesia, Malaysia, Saudi, Arabia, Myanmar, Vietnam, Syria wdg. Na ngwaahịa ndị dị elu na ọrụ zuru oke mgbe ahịa gachara. , DTS emeriwo ntụkwasị obi nke ndị ahịa ma na-ejigide mmekọrịta kwụsiri ike nke ọkọnọ na ọchịchọ nwere ihe karịrị 130 ama ama ụdị ụlọ na mba ofesi.
Imewe na rụpụta
Iji bụrụ onye ndu kachasị na ụlọ ọrụ nri na ihe ọ beụverageụ na ihe ọverageụ globalụ zuru ụwa ọnụ bụ ebumnuche nke ndị DTS, anyị enwetala ndị injinia injinịa, ndị injinia na ndị injinia eletrik, ọ bụ nzube anyị na ọrụ anyị iji nye ndị ahịa anyị ngwaahịa kacha mma. , ọrụ na gburugburu ebe ọrụ. Anyị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, anyị makwaara na uru anyị bara bụ inyere ndị ahịa anyị aka ịmepụta uru. Iji gboo mkpa nke ndị ahịa dị iche iche, anyị na-aga n'ihu na-agbanwe agbanwe, iji zụlite ma mepụta azịza ahaziri iche maka ndị ahịa.
Anyị nwere ndị otu ọkachamara nke otu nkwenkwe na-amụkarị ma na-amụ ma na-agbanwe agbanwe. Ndị otu anyị nwere ahụmịhe bara ụba, nlezianya na-arụ ọrụ na mmụọ dị oke mma merie ntụkwasị obi nke ọtụtụ ndị ahịa, yana ọ bụ nsonaazụ nke ndị isi nwere ike ịghọta, ịkọ, na-achụ ahịa ahịa yana atụmatụ ma soro ndị otu na-arụ ọrụ. ihe ohuru.
DTS gbalịsiri ike inye ndị ahịa akụrụngwa kachasị mma, anyị maara na na-enweghị ezigbo nkwado teknụzụ, ọbụlagodi obere nsogbu nwere ike ime ka usoro mmepụta akpaka niile kwụsị ịgba ọsọ. Ya mere, anyị nwere ike ịzaghachi ngwa ngwa ma dozie nsogbu mgbe anyị na-enye ndị ahịa tupu ịre ahịa, ọrụ ahịa na ahịa ahịa. Nke a bụkwa ihe mere DTS ji nwee ike ijide oke ahịa ahịa na China ma nọgide na-eto.
Biko nweere onwe gị iziga anyị ihe ị chọrọ, anyị ga-aza gị.
Anyị nwere otu ndị ọkachamara na-ahụ maka ọrụ injinia maka ijiri gị ozi gbasara mkpa niile.
Enwere ike izigara gị ihe atụ na-enweghị ego iji ghọta ọtụtụ ozi ndị ọzọ.
Nwere ike izipu anyị ozi ịntanetị ma kpọtụrụ anyị ozugbo.
Ọzọkwa, anyị na-anabata nleta na ụlọ ọrụ anyị site na gburugburu ụwa maka ịmatakwu nzukọ anyị nke ọma.
Anyị esoro ahịa 1st, top àgwà 1st, na-aga n'ihu mma, ibe uru na-emeri-mmeri ụkpụrụ. Mgbe imekọ ihe ọnụ na ndị ahịa, anyị na-enye shoppers na kasị elu-edu nke ọrụ.